China API 600 Gate Valve Vagadziri uye Vatengesi | Newsway
Anokosha anoshanda: API 600, Gedhi, Valve, OS & Y, Akanamirwa, Bonnet, Flange, WCB, CF8, CF8M, C95800, Kirasi 150, 300, 2500, 4A, 5A, 6A PRODUCT RANGE: Masayizi: NPS 2 kuNPS 60 Pressure Range : Kirasi 150 kusvika Kirasi 2500 Flange Kubatanidza: RF, FF, RTJ MATERIALS: Kukanda: (A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A, A352 LCB, LCC, LC2) Monel, Inconel, Hastelloy, UB6 STANDARD Dhizaini & gadzira API600 Kutarisana-ne-kumeso ASME B16.10 End Connection ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 Chete) - ...
Anokosha anoshanda: API 600, Gedhi, Valve, OS & Y, Akanamirwa, Bonnet, Flange, WCB, CF8, CF8M, C95800, Kirasi 150, 300, 2500, 4A, 5A, 6A
Masayizi: NPS 2 kusvika kuNPS 60
Pressure Range: Kirasi 150 kusvika Kirasi 2500
Flange Kubatana: RF, FF, RTJ
Kukanda: (A216 WCB, A351 CF3, CF8, CF3M, CF8M, A995 4A, 5A, A352 LCB, LCC, LC2) Monel, Inconel, Hastelloy, UB6
Dhizaini & gadzira API600
Kutarisana-ne-kumeso ASME B16.10
Pedza Kubatanidza ASME B16.5, ASME B16.47, MSS SP-44 (NPS 22 Chete)
1.Zere kana Kuderedzwa Bore
2.RF, RTJ, kana BW
3.Panze Screw & Joko (OS & Y), ichisimuka hunde
4.Bolted Bonnet kana Pressure Seal Bonnet
5.Flexible kana Solid Wedge
6.Renewable zvigaro zvigaro
API 600 Gate Valve igate vharuvhu dhizaini zvinoenderana neAPI 600 standard, API 600 standard chiyero cheAmerican Petroleum Institute. Inowanzo gamuchira wedge rimwe chete gedhi, kana rakasimba wedge gedhi kana inochinjika wedge suwo mamiriro.
Structural Zvimiro API600 Gate Valve
1. Iyo dhizaini dhizaini uye yekugadzira inosangana nezvinodiwa zvemberi zviyero, nekuvimbika chisimbiso uye kugona kuita.
2. Dhizaini dhizaini inoenderana uye inonzwisisika, uye chimiro chacho chakanaka.
3. Inotora wedge-mhando yakasununguka gedhi mamiriro, iine anokungurutsa mabheyari ari epakati uye akakura madhaimendi, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuvhura nekuvhara.
4. Muviri wevharuvhu une huwandu hwakazara hwezvinhu, uye kurongedza uye gasket zvakasarudzwa zvine mutsindo zvinoenderana nemamiriro chaiwo ekushanda kana zvinodiwa nemushandisi, izvo zvinogona kuiswa kune akasiyana kumanikidza, tembiricha uye yepakati kushanda mamiriro.
5. Tora nzira dzakasiyana siyana dzekunze nekune dzimwe nyika pombi flange zviyero uye flange yekuisa chisimbiso pamusoro pemhando kusangana nezvakasiyana zveinjiniya zvinodiwa uye mushandisi zvinodiwa.
Kuiswa kweAPI 600 vharuvhu yesuwo:
1. Tarisa mukati mevhavha yevhavha uye yekuisa chisimbiso pamberi pekumisikidza, uye hapana tsvina kana jecha zvikamu zvinobvumidzwa kutevedzera;
2. Mabhaudhi echikamu chimwe nechimwe chekubatanidza achasungwa zvakaenzana;
3. Tarisa zvikamu zvekurongedza kuti zvimanikidzwe zvine simba, kwete chete kuti uve nechokwadi chekuomarara kwekurongedza, asi zvakare kuona kuvhurika kwegedhi;
4. Usati waisa vharuvhu, mushandisi anofanira kutarisa iyo vharuvhu modhi, saizi yekubatanidza uye anoteerera kune kuyerera kwekutungamira kwepakati kuti ave nechokwadi chekuenderana nezvinodiwa zvevhavha;
5. Paunenge uchiisa vharuvhu, mushandisi anofanirwa kuchengetedza nzvimbo inodiwa yevhayvu drive;
6. Iyo wiring yedhiraivhingi dhizaini inofanira kuitiswa zvinoenderana neye wiring dhayagiramu;
7. Iyo API 600 gedhi vharafu inofanirwa kuchengetedzwa nguva dzose, uye hapana kubonderana kana kusvina kunotenderwa kudzivirira kukanganisa chisimbiso.
Pashure: API 599 Plug Valve
Zvadaro: Akakonzera bhoneti yakabva yanyatsobuda Gate Valve
Api600 Gedhi Valve
Akakanda Steel Gate Valve
Stainless Simbi Gate Valve
Rakanyorwa Gate Valve